iWatermark Pro 2 yeMac. Sebenzisa Iindidi ezili-11 zoKukhusela iiFoto zakho. | Plum emangalisayo
UMHLA: 9 / 11 / 17
ISan Francisco, CA-iWatermark, yiNombolo 1 kwaye sisixhobo sokubukela kuphela esinokufumaneka kuwo onke amaqonga ama-4, i-iPhone / i-iPad, iMac, i-Android kunye neWindows. IWatermark sesona sixhobo sikhulu sokubonisa izixhobo zokubukela iifoto.
Ngokukhuselekileyo, khusela kwaye ukhusele iifoto zakho ngombhalo, Imizobo, iVector, iiLines, Border, Umbhalo kwi-Arc, Isibhengezo sombhalo, ikhowudi ye-QR, iMetata yedata kunye ne-Steganographic watermark. Nje ukuba ifakwe kwifoto le watermark ibonisa ukuba yenziwe kwaye yeyakho.
I-Plum Amazing CEO ithe "Ukuba wabelana ngesithombe esimangalisayo osithathile nge-imeyile, kuFacebook, ku-Instagram, kuTwitter, njl. Kulindeleke ukuba ushiye iintsholongwane emva koko ubhabhe usiya kulawulo lwakho kwaye ngaphandle konxibelelwano kuwe njengomdali. ” Uye wema, emva koko wongeza, "Isisombululo esilula kukutyikitya iifoto / umsebenzi wobugcisa usebenzisa iWatermark enegama lakho, i-imeyile okanye i-url emva koko iifoto zakho zinonxibelelwano olubonakalayo nolusemthethweni kuwe naphi na apho zinokujikeleza khona."
Iindidi ze watermark kwiWatermark azifumaneki nakweyiphi na enye isoftware. Ezinye iitermark ziyabonakala kwaye ezinye azibonakali. Zombini zisebenza ngeenjongo ezahlukeneyo. I-watermark ebonakalayo kulapho uphakamisa uphawu lwakho okanye utyikityo lomfanekiso wakho.
Umda wegraphic Border-Umda wevektha onokuthi wolulwe ujikeleze umfanekiso kwaye ulungelelaniswe usebenzisa iindlela ezahlukeneyo zoseto.
Imigca -Ithandwa kakhulu kwizindlu zeefoto zesitokhwe oku kuchuliweyo kodwa kunzima ukususa i-watermark.
Isibhengezo-Yongeza indawo ebhanna kuyo nayiphi na ifoto apho umbhalo unokongezwa khona.
* Ukutshintsha ubungakanani kwakhona kwimveliso nasekufakweni.
* Qamba iifayile ukusuka kwigalelo ukuya kwimveliso.
* Yongeza iithowudi zeefayile
* Ukukhuphela ii-watermark kunye nokusetyenziswa kwinguqulelo yeMac.
* Ngokukhawuleza i-32/64 ye-app enemisonto emininzi enokusebenzisa ii-CPU / GPU ezininzi.
* Iiprofayili zemibala ekhethiweyo yomsebenzisi.
* Yongeza, ususe kwaye uhlele imethadatha (i-ExIF, i-GPS kunye ne-XMP).
* Iifonti ezingenamda.
* Yabelana kwi-Facebook, Flickr, Instagram, Twitter kunye nezinye ezininzi.
* Umphathi weWatermark onokulandelela amakhulu eewatch. Umphathi ukwavumela ukukhiya / ukuvula, ukufaka i-IPTC / XMP, ukukhangela, ukuphinda igama, ukucima, ukujonga kwangaphambili, ukudibanisa, ukuthumela ngaphandle, ukuhambisa i-batch kunye nokwabelana ngewatermark.
* Shumeka idatha ye-IPTC / XMP ngalo lonke ixesha isetyenziswa kunye okanye ngaphandle kwewatch ebonakalayo. Ilungele imibutho yeendaba.
Utshintsho kwinguqulo 2.0
-Ii-tag ezihlaziyiweyo kumhleli wombhalo weWatermark weGPS (iStetet kunye neLat.) Kunye neNgoku (umhla, ixesha, unyaka, itotali) kunye neeMpawu zeFayile.
-Ukujikeleza okunikwe amandla kunye nokulinganisa ukuthambeka kokubhaliweyo, kwiGrafiki nakwiiVeter watermark. Kunye ne-Smart Zoom yokuvula / ukucima ukukala.
-Kwenziwe ukuKhangela okuKhawulezileyo kwimbonakalo yangaphambili cofa kwi-smart Zoom kwimbonakalo yegalelo. okt. Nyanzela ucofe kunye nengxelo ye-haptic.
-Ukulungiswa kokucwangciswa okucwangcisiweyo komphathi weWatermark ICON ikholamu.
-I-Counter evunyelweyo kwiTebhu yokuNika igama kwakhona ngalo lonke ixesha, kuba ikwasetyenziswa kwiiData zeDatha yeDatha.
-Umhleli woMhleli woMxholo wokufaka i-tag wawungekho
-Iimpawu ezongeziweyo zeNyanga yokuDala, uSuku lweNdalo kunye neNyanga # # kunye nosuku ##.
Ngomhla wokudalwa kwefoto:
ukuvumela . . ukuvelisa 2017.03.10 kwiithegi zombhalo.
- Yongeza umbhalo obhaliweyo / okroliweyo
- Ui ezininzi ziyatshintsha
Iewermarket ezintsha ezongezwe ukusukela kuguqulelo lwe-1.0, Imigca, iBorder, isicatshulwa kwiArc kunye neBhanari yokubhaliweyo
-Umhleli wombhalo ohleliweyo ongasemva kwakhona ucima iDropshadow.
-Kongezwe imvelaphi yesitshixo se-watermarkOnOff-boolean ukulandelela ukuba i-alpha yiZero (icinyiwe).
-I-Counter evunyelweyo kwiTebhu yokuNika igama kwakhona ngalo lonke ixesha, kuba ikwasetyenziswa kwiiMeta zeDatha yeDatha.
-Ithegi eyongeziweyo yamanani ayi-7 e-GPS '', '' inika ukuchaneka kwamanani ama-3.
-Ii-tag ezihlaziyiweyo kumhleli wombhalo weWatermark weGPS (iStetet kunye neLat.) Kunye neNgoku (umhla, ixesha, unyaka, itotali) kunye neeMpawu zeFayile
-Ukujikeleza okunikwe amandla kunye nokulinganisa ukuthambeka kokubhaliweyo, kwiGrafiki nakwiiVeter watermark. Kwaye Smart Zoom yokulinganisa ukukala / ukuvala.
-Umhleli: Ukusebenza: Ukugcina i-caching yomfanekiso ongumthombo kumhleli wokuphinda uyile ngokukhawuleza. Eyona iqaphelekayo xa umthombo ingumfanekiso omkhulu weRAW.
-Izilungiselelwe kunye nee-bugs zilungisiwe
Isoftware ePlum emangalisayo namhlanje ibhengeze inguqulelo 2.0 ye-iWatermark Pro ye-Mac. I-iWatermark, sisixhobo ekuphela kwaso esibonakalayo kuwo onke amaqonga ama-4, i-Android, i-iPhone / i-iPad, iMac kunye neeWindows. I-iWatermark Pro yeyona nto ibalulekileyo yokujonga iifoto kubanikazi beefoto zeshishini kunye nokuzisebenzisa. Batch okanye ulandelelwano ngokulandelelana. Ukudibana nokulinganisa ngokupheleleyo. Iintlobo zamanzi ziyabandakanya, Isicatshulwa, iGrafu, iVector, iMida, umda, isicatshulwa kwiArc, isibhengezo sombhalo, ikhowudi yeQR, Isiginitsha, iMetadata kunye neSteganographic
Ikhonkco elipheleleyo leWatermark Pro yokuLayisha 
Iscreen 1 -Ifestile ephambili yeWatermark Pro 
Iscreen 2 -Ukufaka / ukuphuma kweeTreyi zeWatermark Pro 
Icon yeWatermark Pro App 1024 × 1024 
IPlum emangalisayo, i-LLC yinkampani eyimfihlo ebekelwe ukwenza ii-Mac, iiWindows, ii-Android kunye neeapps ze-iOS. IPlum Amazing ngumboneleli wehlabathi wesicelo sedesktop kunye nedesktop ukusukela ngo-1995. IPlum Amazing yenza kwaye ithengise isoftware ngeyayo kunye newebhusayithi ka-Apple kodwa ikwenze nomsebenzi wophuhliso (wenkqubo) wezinye iinkampani kunye nabaxhasi ngakumbi kwindawo yokufota. Sinomdla wokwenza iimveliso ezinkulu ezinjengeCopyPaste, iWatermark, yKey, iClock, iTinyAlarm, iTinyCal, iPixelStick nezinye. Ilungelo lokushicilela (C) 2017 Plum Iyamangalisa. Onke Amalungelo Agciniwe.